Ahoana ny fanombanana ny vidin'ny vatosoa? Vaovao farany 2021. Torohevitra tsara
Ahoana ny fanombanana ny vidin'ny vato?
Ampahafantaro ny vatosoao
Fantaro ny kalitaon'ny vatosoa
Fantaro ny tsenan'ny mason-koditrao
Ankoatra ny diamondra dia tsy misy loharano vidin'ny vato manerantany. Misy firenena manandrana mametraka lalàna. Saingy ireo lalàna ireo ihany no manan-kery. Any amin'ny ankamaroan'ny firenena eto amin'izao tontolo izao dia tsy misy lalàna mifehy.
Ny vidin'ny vato dia valin'ny fifanarahana teo amin'ny mpivarotra sy ny mpividy. Mazava ho azy, misy ny fitsipika fototra amin'ny fanombanana ny sandan'ny vatosoa, izay farito etsy ambany.
Voalohany, tsy maintsy mamantatra ny vatanao ianao, dia ny hoe inona no fianakavian'ny vato? Inona ny karazana vato? Ara-boajanahary ve izany?
Avy eo, raha hitanao fa voajanahary ny vato, ny fanontaniana manaraka dia: Manaraka ve sa tsia?
Raha raisina ny vatanao, ny fanontaniana manaraka dia: Ahoana ny fomba fitsaboana natao teo amin'ny vato?
Ireo aloha masontsivana dia hahafahantsika manomboka manombatombana amin'ny kalitaon'ny vato.
Izany matetika no karazana fampahalalana hitanao amin'ny certificates rehetra navoakan'ny laboratoire gemologique. Satria ireo dia fampahalalana izay tsy azonao fantarina amin'ny tenanao raha toa ka tsy manam-pahaizana momba ny mpahay siansa ianao ary raha tsy manana fitaovana laboratoaran'ny mpahay siansa ianao.
Saingy tsy ampy ny manombatombana ny sandan'ny vato.
Raha vao fantatra mazava tsara ny vato dia tsy maintsy faritana ireo fepetra efatra fanampiny.
Ny voalohany dia ny lokon'ny vatosoa, ny faharoa dia ny fahatakarana ny vato, ny fahatelo dia ny kalitao amin'ny famoahana ny vato ary ny fahefatra dia ny lanjan'ny vato.
Ireo fepetra efatra ireo dia fantatra amin'ny tsenan'ny diamondra, saingy vitsy no mahalala fa ireo fitsipika ireo ihany no mihatra amin'ny vatosoa rehetra.
Rehefa fantatrao ny vato dia mbola misy teboka iray hamantarana hoe: ny vidin'ny vato eny an-tsena, arakaraka ny toerana misy anao ara-jeografika sy mifanaraka amin'ny toeranao eo amin'ny tsena varotra.
Raha ny marina, vato iray mitovitovy aminy dia ho lafo kokoa amin'ny firenena niaviany raha ampitahaina ny vidiny any amin'ny firenena iray any amin'ny faran'ny tany hafa.
Ary farany, ny vidin'ny vato dia ho hafa ihany koa miankina amin'ny hividiananao vatosoa amin'ny tsena ambongadiny na reatail. Hafa ihany koa ny vidiny arakaraka ny hoe efa nitaingina vatosoa na tsia ilay vato.
Amin'ny ankapobeny, toy ny any amin'ny sehatra ara-toekarena rehetra, ny mpanelanelana kokoa eo amin'ny mpamokatra mavokely sy ny mpanjifa, ny avo kokoa amin'ny vidiny.
Tsy misy fanamboarana haingana. Raha te hanombatombana ny vidin'ny vato ianao dia tsy maintsy manao fandinihana eny an-tsena ho anao ianao amin'ny fandehanana mihaona amin'ireo mpamatsy vatosoa any amin'ny toerana misy anao, ary noho izany, amin'ny fampitahana ny vidiny, dia hanana hevitra sarotra ianao ny vidin'ny vatosoa izay mihatra amin'ity faritra ara-jeografika ity amin'izao ora marina izao.
Asa maharitra satria afaka miova haingana ny vidiny.
Raha liana amin'ity lohahevitra ity ianao, te-hiala amin'ny teôria mankany amin'ny fampiharana, dia manolotra izahay gemology taranja.
Ny tahan'ny fifanakalozana tena an'ny Netherlands Antilles Guilder (ƒ)
CRC: Colon Costa Rican (₡)
GBP: Kilao sterling (£)
GMD: Gambiana dalasi (D)
MMK: Birmana kyat (Ks)